Home News Wararkii ugu dambeeyay Dil naxdin leh oo ka dhacay Muqdisho
Wararkii ugu dambeeyay Dil naxdin leh oo ka dhacay Muqdisho
Kooxo Hubeysan ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay degmada Xamar Jajab ee Muqdisho Ku dileen wiil dhalinyaro ahaa.
Dilka ayaa waxuu si gaar ah kaga dhacay Nawaaxiga Buundada Ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababa ka dambeeya dilka wiilkaasi dhalinyarada ahaa oo la sheegay xiliga dilka loo geysanayay inuu ka imaaday goob uu kusoo ciyaarayay, ciyaarta kubada Cagta.
Ciidamo katirsan dowladda ayaa gaaray goobta dilka uu ka dhacay, kuwaa oo meydka wiilkaasi qaaday.
Ilo xog ogaal ah ayaa sido kale xaqiijiyay in wiilka la dilay horay sidaan oo kale loo dilay aabahiis, oo la sheegay inuu ahaa Nabadoon xirir la leh dowladda.
Wali majirto ilaa hada cid sheegatay mas’uuliyada.
Previous articleAqoonyahan ku baaqay in lala heshiiyo Shabaab ama Daacish
Next articleQaraxii maanta oo gaystay dhimasho iyo dhawac
Mooshinka Raiisul Wasaare Kheyre oo Fashil Ku Dhaw&Xildhibaano Ka Laabanaya Mooshinka...
Madaxweynaha Galmudug oo shir gudoomiyay kulanka Golaha Wasiirada